डीएनए परीक्षण पूर्वजों - डीएनए टेस्ट वंशावली
डीएनए परीक्षण पूर्वजों
संसारका पुर्खाहरूको सबैभन्दा विस्तृत आनुवंशिक परीक्षणको साथ आफ्नो जडहरू पत्ता लगाउनुहोस्
तपाईंको डीएनएमा तपाईका सबै पुर्खाहरू छन्, हजारौं वर्षका लागि आनुवंशिक जानकारी पीढी पीढीबाट तल पुग्यो जबसम्म यो तपाईं पुग्छ। हाम्रो टेक्नोलोजीको साथ, अब यो जानकारी डिकोड गर्न सम्भव छ र तपाईका पुर्खाहरू कहाँबाट देख्न सकिन्छ। तपाईं आफ्नो पूर्वज जड़ को मूल देख्न सक्नुहुन्छ।
म अहिलेका पुर्खाहरूको परीक्षण गर्न चाहन्छु
यो परीक्षण कसरी भयो?
हामी तपाइँलाई संसारमा कहीं पनि एक डीएनए किटलाई पठाएको छ। केही सरल निर्देशनहरू पछ्याउँदा तपाईंको मुख भित्र भित्र कपास स्वाबलाई रमाउनुपर्छ। यो आउँदो केहि हप्ता पछि हामी तपाईंलाई ईमेल द्वारा रिपोर्ट पठाउछौँ।
हामी कसरी पुर्खाहरूको आनुवंशिक अध्ययन गर्छौं?
एक पटक हामीले तपाईंको मुखमा सेलहरूको डीएनए पढेका छौं, हामी तपाईंको आनुवंशिक नक्सा हाम्रो एल्गोरिदमको साथमा विश्लेषण गर्छौं। त्यहाँ आनुवंशिक उत्परिवर्तनहरू जुन संसारका केही ठाउँहरूको विशेषता हो, यस तरिकाले हामी तपाईंको पूर्वजहरू के भौगोलिक क्षेत्रहरू देख्न सक्छौं।
यदि तपाइँ हाम्रो पूर्वज परीक्षणको उदाहरण हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँ यसलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ:
उपलब्ध रिपोर्टहरू अंग्रेजी, जर्मन, Frances, इटालियन, Polaco र español
हामी कति वर्षहरू फर्किए?
हामी सैकड़ों र हज़ारौं वर्षहरू फिर्ता जान्छौँ। जेनेरिक द्रुत जहाँ हामीले प्रायः फोकस गर्यौं त्यस बारेमा 700 वर्ष पहिले; 20 वा 30 पीढीहरू।
के पूर्वजोंका सबै डीएनए परीक्षणहरू त्यस्ता छन्?
होइन, न त समान। पुर्खाहरूको आनुवंशिक परीक्षण संसारमा सबैभन्दा उन्नत छ। हामी भन्दा बढी विश्लेषण गर्छौं 1000 भौगोलिक क्षेत्रहरू (दोश्रो देखि अधिक हाम्रो प्रतियोगिहरु को सर्वश्रेष्ठ)। यस पेजको अन्त्यमा तपाईंले हाम्रो भौगोलिक क्षेत्रहरूको सूची हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सूची हरेक महिना बढ्छ।
अन्य पुर्खा आनुवंशिक परीक्षणहरूको विपरीत, 24Genetics मा हामी क्षेत्रहरु या अधिकांश युरोपेली देशहरु र एशिया मा सबै भन्दा ठूलो सहित 1000 भौगोलिक क्षेत्रहरु भन्दा अधिक डेटा प्रदान गर्न सक्षम छन्।
कसरी भिन्नता पाउनेछ?
सजिलो, हामी तपाईंलाई एक उदाहरण दिन्छौं जब अरूले तपाईंलाई बताउनेछ कि तपाइँसँग उत्तरी यूरोपको 10% छ, हामी तपाईंलाई बताउन सक्छौ कुन नॉर्डिक देशहरूसँग तपाईसँग 10% र कुन देशहरू वा त्यस देश भित्रका क्षेत्रहरू। अर्को उदाहरण: अरूले तपाईंलाई बताउनेछ कि तपाईं एक 60% आईबेरियन हुनुहुन्छ जुन नक्सा, सबै स्पेन, पोर्चुगल र दक्षिणी फ्रान्समा सम्मिलित छ; हामी तपाईंलाई बताउछ कि त्यो प्रतिशत स्पेन बाट र स्पेनमा छ हामी तपाईंलाई कुन स्वायत्त समुदाय (हामी सबै छौँ) बताउँछौं।
के तपाईं आफ्नो परिवारको रूख सिर्जना गर्न र आफ्नो डीएनए को माध्यम ले रिश्तेदारों को खोज गर्न चाहते हो?
हाम्रा सबै जीनोटाइप उत्पादनहरूले कच्चा डाटा समावेश गर्दछ। धेरै कम्पनीहरूले पारिवारिक मिलान सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछ जुन कच्चा डाटा फाइलहरू आवश्यक पर्दछ। हामी ती सबै पक्षलाई सल्लाह दिन्छौं जसले कम्पनीको गोपनीयता, सुरक्षा र पारदर्शिता नीतिहरू सुनिश्चित गर्न यी तेस्रो-पक्ष सेवाहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। कच्चा डाटा, परिवार खोजको लागि आवश्यक जानकारी को अतिरिक्त, धेरै व्यक्तिगत जानकारी समावेश गर्दछ।
के तपाईंले पहिले नै २and एन्डएम, एफटीडीएनए वा अरु कसैसँग परीक्षण लिइसक्नु भएको छ?
तपाईं पहिले नै आनुवंशिक परीक्षण गरेका छौँ भने, हामी आफ्नो प्रतिवेदन प्राचीन 24Genetics सिर्जना गर्न आफ्नो कच्चा डेटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र कुन क्षेत्रहरु र स्वायत्त समुदाय आफ्नो पुर्खाहरूको, कुनै अन्य कम्पनी गर्न सक्छन् केहि थिए प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्डर राख्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
यी पूर्वजहरूको डीएनए टेस्टको भौगोलिक क्षेत्र अनुसार देशहरू हुन् (अंग्रेजीमा रिपोर्टमा)
१175 देशहरू र १1500०० भन्दा बढी क्षेत्रहरू
अफ्रिका - countries countries देशहरू र २49० भन्दा बढी क्षेत्रहरू
AMERICAS - countries२ देशहरू र १ 32० भन्दा बढी क्षेत्रहरू
एशिया - countries 43 देशहरू र over०० भन्दा बढी क्षेत्रहरू
यूरोप र रूस - countries० देशहरू र over०० भन्दा बढी क्षेत्रहरू
ओसिएनिया - ११ देशहरू र over० भन्दा बढी क्षेत्रहरू
अफ्रिकामा देशहरूको सूची:
अमेरिकामा देशहरूको सूची:
एशियामा देशहरूको सूची:
युरोप र रूसमा देशहरूको सूची:
ओशिनियामा देशहरूको सूची: